Recipe Iimbombo zeengulube kunye ne-tomato sauce
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imveliso Iibhere
Iimbambo zengulube kunye ne-tomato sauce
Sipheka iimbambo zeengulube Iimbambo zeengulube ziyakuthandwa kakhulu ngamazwe amaninzi, ngoko ke kukho inani elikhulu leempendulo kunye nale mveliso. Kulesi sidlo, iimbambo zeengulube ziphuma nge-tomato sauce kunye negalikhi ebhakawa kwindawo. Ukukhetha iimbambo zeli sidlo, zikhethile izicucu kunye neziqulatho ezinomdla zenyama kunye neoli, ukuze kube yinto yokugcoba. Ngendlela, iimbambo zeengulube ezinomsila onjalo zingaphepheka ngomlilo. Yenza i-Marinize ngenxa yale nto ayimfuneko. Cinga ukuba isitya sidlulisa amafutha kwaye sidle kungcono ukuba singayisebenzisi esi sidlo. Njengesitya esicaleni, imifuno entsha kunye namazambane abilisiwe aphelile. Yaye ungakulibali malunga nemvelo, kuba ayiyi kuhlanganisa nje ukunambitheka, kodwa inokukunceda ukuba ufunde ngokukhawuleza kwaye ugaye ukutya okutyayo.
Iimbombo zengulube 500g
Garlic 2 intloko
I-basil eluhlaza ngokutsha 15 g
Utamatisi unamathisele 4 tbsp. l.
Soy umsizi 3 tbsp. l.
I-Parsley entsha 0.25 ibhola
I-Pepper emnyama mnyama 4
Inyathelo 1 Kulo dya, thabatha: iimbambo zengulube, i-garlic, i-basil entsha kunye neparsley, unamathanga omncuba okanye i-ketchup, i-soy sauce, ioli yeoli, ityuwa kunye nopele.
Inyathelo 2 Ukuhlamba i-Porridge kunye nokucoca ngokukhawuleza ngommese.
Inyathelo 3 Hlanganisa kwi-sola utamatisi wokunamathisa, i-soy sauce, ioli yeoli, iparsley. ITyuwa kunye nepepper. Cima ii-clove ezimbini zegalikhi kwaye udibanise kakuhle.
Inyathelo 4 Hlanganisa inyama phantsi kwamanzi abandayo kwaye unomile ngamaphini ephepha. Ukuhlamba i-Garlic kwaye unqumle isicatshulwa.
Inyathelo 5 I-Smear inyama kunye negalikhi kunye ne-tomato sauce. Faka efomeni elingaqhumisiyo kwaye uthele amanzi amancinci ukuze ugqitywe ngokupheleleyo. Beka ehovini imizuzu engama-40-50 kwisebusuku ka-190-200 ° C. Ngoxa inyama kunye negalikhi ziza kulungiswa, zimanzi kunye nomlambo ofanayo apho batyathwa khona.
Inyathelo 6 iBasil ukuhlamba, isomile kwaye uhlanza. Ukwahlula ngemifuno yengulube kunye negalikhi. Khonze ngokukhawuleza.
Izibambo zengulube ezibiweyo
Isobho leklabishi yesidlo ngeesiliva kunye neklabishi entsha
Ubusi busiya bubuhlungu
I-Baked yengulube neCompkin
Iibhonsi zezinja ezishushu
Ukusasazwa kwemisebenzi kwintsapho, imfundo yokukhuthaza
Ubomi obonwabileyo emtshatweni nomhlobo wakho
Siyavuyisela ngomhla woNtsapho, Uthando nokuthembeka-2017 kumyeni othandekayo, uyise nonina
Qinisekisa inkqubo yesantya ekhaya
IHoroscope ngoJanuwari ngentlanzi
Izilwanyana ezili-10 zaseDollywood zaseHollywood
Ngaba umntu uyadla?
Ukwabelana ngesondo endaweni yobuthakathaka: indlela enhle yokuba ngumncinci
Iitamatisi ezibhakiweyo kunye nokutya okumnandi
U-Evgeny Tsyganov wathatha uJulia Snigir esibhedlele waza wenza amalungiselelo athatywayo kunye nabaphephandaba
Cocktail kunye ne-kumquat
Ipea ipharityhulam enomzimba
Ukuhamba ngesitimela: uthathe ntoni nawe
Ukulala ngokwesondo: izizathu kunye neziphumo